‘मिष्टर नेपाली’ र ‘सम्हाली राख है’ आजबाट हलमा - Image Khabar
‘मिष्टर नेपाली’ र ‘सम्हाली राख है’ आजबाट हलमा
प्रकाशित मिति : 15 November, 2019 12:41 pm
काठमाडौँ । आज शुक्रबारबाट एकसाथ दुई नयाँ नेपाली फिल्म ‘मिष्टर नेपाली’ र ‘सम्हाली राख है’ प्रदर्शनमा आए । देशभरबाट एकसाथ प्रदर्शनमा आएका दुबै फिल्मका कथा भने फरक–फरक छन् ।
‘मिस्टर नेपाली’मा देव भुषालको निर्देशन रहेको छ भने ‘सम्हाली राख है’का निर्देशक आरएल लामा हुन् । ‘सम्हाली राख है’ मा अर्जुन कुवँर, शीतल केसी, राजेन्द्र गोपाली, आरोही बस्नेत, स्नेहशा कार्की, अन्जना खत्री, शंकर कार्की, आर एल लामालगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
ताराशंकर फिल्मस् प्रालीको ब्यानरमा शंकर कार्कीको प्रस्तुति र हरिकृष्ण महर्जनको निर्माण रहेको फिल्मका श्यामकृष्ण महर्जन सह निर्माता रहेका छन् । बिक्रम कार्कीको कथा, ग्रिस रिजालको सम्पादन, देव महर्जनको द्वन्द, जनक कार्की र राजेश शाहीको नृत्य, राजेश श्रेष्ठ र दीपक रमणको संगीत फिल्ममा छ ।
काठमाडौ, कुलेखानी र दोलखाको आकर्षक दृश्य समेटिएको फिल्म प्रेमकथामा निर्माण भएको हो । युवायुवतीमा अहिले मौलाएको प्रेमकथालाई आकर्षक तवरले समसामयिक बिषयबस्तुसँग मिश्रण गरेर सन्देश मुलक प्रस्तुतिका साथ फिल्म निर्माण भएको निर्माता हरिकृष्ण महर्जनले बताए ।
आजै लागेको अर्को फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ भुवन केसी, साहिल श्रेष्ठ, रीमा बिश्वकर्मा र कुसुम राउत अभिनित राष्ट्रियताको कथालाई कमेडी शैलीमा पस्केको फिल्म हो । निर्देशक भुषालको कथा समेत रहेको फिल्ममा अभिनेता भूवन केसी दोहोरो भूमिकामा प्रस्तुत छन् ।
फिल्ममा सरोज खनाल, विष्णु सापकोटा, रवी डंगोल, कमलमणि नेपाल, सुरेन्द्र केसी, नन्दु श्रीवास्तवको समेत अभिनय देख्न सकिन्छ । देवचुली फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको निर्माता प्रेमराज दाहाल हुन् ।
डा.डीआरको गिनिज रेकर्ड गीत सार्वजनिक: १२ देशका भाषामा सुन्न सकिने
काठमाडौं । कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड प्राप्त गर्न सफल गीत
अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा र्‍यापर गायक कान्ये वेष्टले ट्रम्पलाई दिँदै चुनौती
एजेन्सी, असार २१ । अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा र्‍यापर गायक कान्ये वेष्टले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्
अनलाइन तबला प्रतियोगिता निमेश कपाली सर्वोत्कृष्ट
काठमाडौं, असार २१ । वरिष्ठ तबलावादक रविनलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा जयश्री संगीत समाजले आयोजना गरेको अनलाइन
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित दुई कलाकारको आन्तरिक द्वन्द्ध थप चर्किएको छ । अभिनेता
नयाँदिल्ली । बलिउडकी चर्चित नृत्य निर्देशक सरोज खानको ७१ बर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान निधन भएको
नायिकाद्वारा यौन दुर्व्यवहारको आरोपः कानुनी कारबाहीमा किन नजाने ?
सागर महर्जन (इमेज) काठमाडौं, असार १७ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्नु नौलो